Axmed Daaci oo shaaciyay war-xaqiiq ah oo haatan ka jirta dalka Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Axmed Daaci oo shaaciyay war-xaqiiq ah oo haatan ka jirta dalka Soomaaliya
Gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir ahna musharax Axmed Xasan Caddow (Axmed Daaci) ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in xilligaan laga gudbay xildhibaanada lagu soo dooran jiray qoriga iyo dagaalada, islamarkaana uu qof kasta haatan xilkaasi ku heli karo aftahanimo, xod-xodasho iyo inuu kharash ku bixiyo si uu xildhibaan u noqdo.
Axmed Daaci oo wareysi siiyay mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho ayaa tilmaamay in xildhibaanimadu noqotay mid lagu helayo garab-taabasho, wuxuuna ku kaftamay inuu furayo boorsadda lacagta, si loogu doorto xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soo socda.
Waxa uu siyaasiga Axmed Daaci dhinaca kale is-barbar dhigay nidaamka haatan lagu soo xulayo xildhibaanadda iyo xilligii hoggaamiye-kooxeedyadda ee horey loo soo maray.
Ugu dambeyntii, Axmed Daaci ayaa wareysigiisa kaga hadlay howlaha guddiga doorashadda dadban, nidaamka federalka iyo sida ay maamul-gobaleedyadda u soo xulayaan xubnaha dadka ka mid noqonayo labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka kasoo yeeray gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Daaci ayaa kusoo beegmaya, xilli inta badan siyaasiyiinta ay u xusul-duubanayaan xildhibaanimada labada Aqal ee baarlamaanka soo socda, kuwaas oo xilkaasi ku raadinayaan xeelad kasta, si ay odayaasha wax soo xulayo uga daraan liiska xildhibaanimada cusub ee baarlamaanka.